लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डमा प्रायोजन - Nagen News
Nagen News २०७७, १३ चैत्र शुक्रबार March 26, 2021 134 Views
पोखरा । पाँचौं पोखरा स्पोर्टस् अवार्ड–२०७६÷०७७ मा प्रदान गरिने लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डलाई प्रायोजन सम्झौता भएको छ ।
पोखरा लेकसिटीका निर्देशक डा. विष्णु नेपाली र नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकी अध्यक्ष एकराज गिरीबीच सहमतिपत्रमा बिहीबार सम्झौता भएको हो ।
खेल गतिविधिले मानव स्वास्थ्यमा सहयोग पुग्ने उल्लेख गर्दै डा. नेपालीले मञ्चले आयोजना गरेको स्पोर्टस् अवार्ड सबैको लागि महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।
मञ्च अध्यक्ष गिरीले स्पोर्टस् अवार्डमा सहयोगदाता ?पमा जोडिएकोमा आभार व्यक्त गर्दै सम्पूर्णको सहयोगबाट अवार्ड सभ्य र भव्य ?पमा सम्पन्न गर्न मद्दत मिल्ने बताउनु भयो ।
जसमा लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड, वर्ष खेलाडी पु?ष, वर्ष खेलाडी महिला, उदियमान खेलाडी, उत्कृष्ट प्रशिक्षक, उत्कृष्ट खेल संघ, उत्कृष्ट खेल पत्रकारिता अवार्डमा नगदसहित अवार्ड वितरण गर्नेछ । तीमध्ये उत्कृष्ट खेल पत्रकारिता अवार्ड यसपालि २ पत्रकारले पाउनेछन् ।